I-Samsung Galaxy M40: imifanekiso emitsha iyangqina uyilo | I-Androidsis
Umvelisi waseKorea uyaqhubeka nokwandisa usapho lwakhe lwe-M, ejolise ekuhlaseleni inqanaba lokungena kunye nakumgangatho ophakathi wentengiso ngezisombululo zoqoqosho kakhulu ezineempawu ezaneleyo zokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Ngexesha eliza kukubonisa yonke i-dIinkcukacha ze-Samsung Galaxy M10 kunye ne-Galaxy M20 emva kwenkcazo yayo esemthethweni, kwaye ngoku sikulethela imifanekiso emitsha engqina ukuba uyilo lwe-Samsung Galaxy M40.
Sithetha ngemodeli yenqanaba lokungena eliza kuba nenqaku elinomdla kakhulu: ibhetri yayo enkulu ye-5.000 mAh ukubonelela ngokuzimela okungazange kubonwe ngaphambili kwisixhobo esivela kuhlobo olusekwe eSeoul. Makhe sibone ezinye iinkcukacha ze I-Samsung Galaxy M40 Phambi kwengcaciso-ntetho yakhe ekufutshane.
I-Samsung Galaxy M40
Kuba inye into ecacileyo. Ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo siqinisekisile ukuba le modeli igqithile Isiqinisekiso soManyano lweWiFi, inyathelo elibalulekileyo lokukwazi ukuthengisa le modeli kwintengiso yaseMelika, kunye nale mifanekiso isemthethweni eqinisekisa Uyilo lweSamsung ye-M40, kucacile ukuba le modeli isondele ngakumbi kunangaphambili.
Lumka, sifumana isixhobo esinekrini esiya kuba malunga nee-intshi ezi-6.4, sine Iphaneli ephezulu ye-AMOLED ukubonelela ngecandelo le-multimedia elipheleleyo. Kule nto kufuneka songeze uyilo ngohlobo lokutshixwa kwamanzi lokubonelela uyilo lwescreen sonke kunye nezakhelo ezincinci. Ukuba yifowuni enexabiso eliphantsi evela eSamsung, asinazo ezinye iinkcukacha ezibonwayo kubantakwabo abadala, ezinje ngomfundi ofunda iminwe odityaniswe kwiscreen.
Ngale ndlela, i-Samsung Galaxy M40 iya kukhwela umfundi weminwe wesiko ngasemva, nangona kutshintshiselwano sifumana inkqubo ye ikhamera kathathu, Into engaqhelekanga kwisixhobo sokungena phakathi-kuluhlu. Kule nto, kufuneka songeze umzimba owenziwe ngezinto ezintle, ngokuqinisekileyo ialuminium, ukunika ilungu elitsha losapho lakwa-M ipremiyamu kunye nomtsalane.
Njengesiqhelo kwiimodeli zenkampani, sifumana amaqhosha olawulo lwevolumu, ukongeza isixhobo kunye nokucofa iqhosha kwicala lasekunene le-Samsung Galaxy M40, ngelixa icala lasekhohlo licocekile ngokupheleleyo. Kuya kwenzeka okufanayo nenxalenye ephezulu yefowuni, ngelixa emazantsi sifumana izinto ezimbalwa ezinomdla kakhulu.
Ukuqala, ngokwefayile ye- Imifanekiso yeGalaxy M40 Ukusuka kwi-Samsung evuziweyo, ilungu elilandelayo losapho olusekwe eSeoul luza kuba nesithethi emazantsi, ukongeza kwizibuko lohlobo C lwe-USB. Kubonakala ngathi, emva kokulinda ixesha elide, olu hlobo lonxibelelwano ukuzinzisa kwinqanaba lokungena kunye nakumbindi wecandelo, kushiya isinxibelelanisi seMicro USB ngakumbi nangakumbi ecaleni.
Kwaye, kungenjalo kungenjalo, inkampani yaseKorea iyaqhubeka nokubheja kwi Iziphumo zeaudio ezi-3.5mm ukuze abona basebenzisi be-audiophile basebenzise nayiphi na i-headset enentambo kwi-Samsung Galaxy M40. Ewe kunjalo, nangona imifanekiso ingabonisi naluphi na ulwazi malunga nayo, kuyacaca ukuba le modeli ayinakuba nalo naluphi na uhlobo lwesatifikethi esinika ifowuni ukumelana nothuli namanzi. Kwenye indawo umenzi kufuneka anciphise ukunciphisa iindleko zokuvelisa ...
Ngokumalunga neempawu zobuchwephesha bale modeli, amarhe acebisa ukuba iya kubetha kwintliziyo yesilicon eyenziwe yi-Exynos 7904 okanye iprosesa ye-Exynos 9610, ukongeza kwi-4 okanye kwi-6 GB ye-RAM kunye nokugcinwa kwe-128 GB, ukongeza mammoth 5.000 mAh ibhetri, ngaphezulu ukwanela ukuxhasa ubunzima obupheleleyo bezixhobo kunye nokubonelela ngokuzimela okugqwesileyo okuya kwenza umahluko xa kuthelekiswa neentshaba zayo.
Malunga nomhla wokukhutshwa kunye Ixabiso leSamsung M40, okwangoku kuyimfihlakalo, nangona kulindeleke ukuba le modeli ibone ukukhanya kungekudala kwaye ibe nexabiso eliphakathi ngokwenyani njengoko lingagqithi kwi-euro ezingama-300.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung ye-Samsung M40 isondele kunangaphambili, imifanekiso emitsha iyangqina uyilo lwayo
I-Energy Sistem Music Box 9 uhlalutyo lwesithethi